Usomabhizinisi wase-Afrika-waseMelika udala ama-sneaker wokuqala abomvu okwenziwe ngokwezifiso-mnyama-green- AFRIKHEPRI
I-Akon ekhanyisa i-Afrika ukukhanyisa ama-Afrika ayizigidi ezingama-600
ilanga, july 5, 2020
Imboni yezicathulo iye yaqhubeka nezinguquko eziningi eminyakeni engu-30 yokugcina. Ukuvela brand global njengevolomu Nike, Jordan, Adidas futhi Xoxa ephezulu design Gucci izicathulo, Armani Polo, manje ukuthuthukiswa entsha embonini sneaker iyona sneaker ngezifiso eyenzelwe izinhlangano, izikole, abaculi nabadumile. Sneakerscustom.com, esekelwe e-Atlanta.
Yakha ngunkontileka uTariq Edmondson, Sneakerscustom.com yindlela entsha ezintsha ukwenza inzuzo izikole, izinhlangano noma ubani nge nezifiso ukwenza umkhiqizo wabo siqu of amateki. Umkhiqizo wokuqala umkhankaso isicathulo esihle somshumbane omnyama esinombala obomvu nokuluhlaza okwenziwa ngokushesha. Eshukunyiswe ukuklanywa Xoxa Chuck Taylor, Red, Black & Green izicathulo ngokushesha baba intandokazi ukuqaphela Afrika baseMelika e-United States, eCaribbean ngisho United Kingdom.
"Ukuphefumulelwa kwami ​​kwafika cishe ngonyaka nengxenye edlule, ngabona kuzo zonke ezinye izinkampani ezinkulu zezingcweti, futhi ngacabanga ukuthi umkhiqizo wezingcweti ezinobomvu obomvu, obumnyama futhi ozoba nomthelela," kusho uTariq.
Le nkampani idale iphayiphi entsha yokusabalalisa ngokuthengisa ngqo abathengi nabathengi ngokusebenzisa iwebhusayithi. Loluhlelo lube nesimiso esincane sezindleko eziphansi zeSneakerscustom.com kwabanye osomabhizinisi ukuze bazibandakanye ebhizinisini elikhulayo. Uhlelo lufaka izici ze-custom ze-50 zenkambiso jikelele ze-1000 $ USD. Isikebhe ngasinye sithengisa nge-40 $ USD, okuvumela umthengisi ukuthi athole inzuzo ye-20 $ USD ngamapayipi amabili.
Ikhono lemakethe ekhulayo yezimakethe ze-niche ukuze abe nesithandwa sneaker siqu esingenamkhawulo. Ezinyangeni ezimbalwa nje kuphela, zonke izinhlobo zezinhlangano zenze izicelo zokudala umugqa wazo wezingodo. I-Harambee Leadership Academy esekelwe eColumbus, Ohio yenza izicathulo ezibomvu, ezimnyama neziluhlaza izicathulo ezisemthethweni zesikole. Ukusebenzisa imigomo ye-Ujima, okusho ukuthi "umnotho wokubambisana" I-Sneakercustom.com izovumela bonke labo abanesifiso sokuba yinsomabhizinisi. "Siyasiza ukuqinisa izinhlangano emphakathini ngamanki ethu, okuzokwenza ukuthi kutholakale imali nokuziqhenya komphakathi," kusho uTariq.
"Nginezingcingo ezivela ezindaweni zonke; Malaysia, eBrooklyn, Dallas, Florida, Washington, Detroit, Chicago, naseCalifornia. Ngaphezu kwalokho, isayithi lithole izicelo ezivela eJalimane, eNetherlands, eCanada, eFrance naseJamaica, "kuchaza uTariq.
Izicathulo zokuqala zezemidlalo zikhishwe ngokusemthethweni ngoJune 2015 futhi zitholakala emhlabeni jikelele ngokusebenzisa iwebhusayithi kanye nakwamanye amazwe agunyaziwe. "Lena yindlela entsha yokufinyelela abathengi be-niche, ngiqoqa izicathulo zezemidlalo iminyaka engaphezulu kwe-20 futhi, njengamahhashi abomvu, abamnyama nabansundu abane logo le-Afrika eceleni ... ngihlela ukujoyina iqembu futhi abe ngumthengisi, "kusho uBrian Lassiter, osomabhizinisi kanye nabathengisi bezingodo.
Njalo emaphethelweni, Sneakerscustom.com inamamodeli amasha amasha alungele i-2016 Spring. Ukuze ufunde kabanzi mayelana nomugqa wabo wemikhiqizo ye-sneaker vakashela ku-www.sneakerscustom.com noma uxhumane nawo ku-Facebook naku-Twitter.
I-Sneakerscustom.com idizayini, ikhiqiza futhi isakaza izicathulo nezicathulo ezenzelwe amadoda nabesifazane. Kwaqala ku-2015, abathengi bangahle bahlele ngqo kusuka kuwebhusayithi yenkampani noma abadayisi abavunyelwe ukuba babe. Ukuze uhlele okuthe xaxa, vakashela ku-www.sneakerscustom.com/products/rbgs.
Ukubuka intaba phakathi kwethu (2017)
Afrikhepri Foundation on I-Akon ekhanyisa i-Afrika ukukhanyisa ama-Afrika ayizigidi ezingama-600: "Ngiyabonga Akon!" Jul 5, 17:36
Afrikhepri Foundation on Iqiniso leqiniso - Imibhalo (2016): "Idokhumenti enhle kakhulu!" Jul 5, 17:12
Mathewu on Uhambo lokuqala - uMattheeu Grobli: "Incwadi enhle kakhulu!" Jul 5, 17:00